Angatahana ny VPN hanakana ireo tranonkala voaràra, saingy tsy nanaiky ny ankamaroany · Global Voices teny Malagasy
Angatahana ny VPN hanakana ireo tranonkala voaràra, saingy tsy nanaiky ny ankamaroany
Ny iray rosiana ihany no tolotra tokana hanaiky ny fangatahana
Voadika ny 04 Avrily 2019 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Shqip, русский, Italiano, Français, Español, čeština , English
Skitterphoto, CC0 Skitterphoto under CC0
Nilaza tamin'ny fanambarana an-gazety ny mpandrindra ny media ao Rosia tamin'ny 28 Martsa fa nandefa taratasy tany amin'ireo mpamatsy VPN miisa 10, mangataka azy ireo hanakana ny fidiran'ny mpiserasera amin'ny tranonkala “voaràra” ao Rosia.
Mangataka ny ao amin'ny taratasy mba hifandray amin'ny “Rafi-baovao ao amin'ny Fanjakana Federaly (Federal State Information System)” (FGIS) ireo mpamatsy VPN, ny FGIS dia rafitra teknika izay hampilaza ny tolotr'izy ireo mikasika izay tranonkala tokony hosakanana. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny lalàna fialàna sivana napetraky ny mpandrindra izay nampiharina tamin'ny novambra 2017 ny fanapahan-kevitra.
Tsy araka ny lohatenin-dahatsoratra sasantsasany, tsy mandràra ny tolotra VPN ny lalàna. Fa mitaky amin'izy ireo kosa ny hanaja ny “lisitra mainty” misy ireo tranonkala voaràra nataon'ny governemanta ary hanakana ny mpisera Rosiana tsy hiditra amin'izy ireo.
Mazava ho azy fa mifanohitra amin'ny tanjon'ny VPN izany, izay teknolojia ampiasaina indrindra mba hanampiana ny olona hiditra amin'ireo tranonkala voasakana ao amin'ny faritra misy azy ireo. Iray amin'ireo fepetra isan-karazany noraisin'ny Roskomnadzor, mpandrindra ny fampitam-baovao (Tolotra Federaly ho Fanarahamaso ny fifandraisana, ny teknolojiam-baovao sy ny haino aman-jery) nandritra ny taona vitsy lasa ny lalàna, tamin'ny ezaka hanatsarana ny fanarahamaso izay azo sy tsy azon'ny Rosiana jerena amin'ny aterineto.
Raha mandà tsy hanaraka ny lalàna tamin'ny fitakiana an-tsoratra nataon'ny Roskomnadzor ireo tolotra VPN ireo, nilaza ny fanambarana an-gazety fa mihevitra ny “hametra ny fidirana amin'ny tolotra VPN” ny sampana.
Na dia izany aza, ho an'ireo mpamatsy tolotra VPN, tsy misy tombontsoa mazava ny fanekena ny fangatahan'ny Roskomnadzor. Nanazava tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Novaya Gazeta ilay mpikatroka ny fahalalahan'ny aterineto, Vladislav Zdolnikov:
Tsy misy tolotra VPN vahiny hanaiky hanaraka ity lalàna ity noho ny antony roa.
Voalohany, dia mifanohitra amin'ny tena fitsipiky ny tolotra VPN rehetra izany, izay ny tanjony, ankoatra ny hafa, dia ny miala amin'ireo fanakanana ary miaro ny fifamoivoizana.
Faharoa, mety ho fampihorohoroana lehibe izany ho an'ny tolotra VPN izay sahy hanaraka. Hoesorin'ny mpanjifa avy hatrany izay tolotra manomboka manivana ny fidirana amin'ireo tranonkala.
Ny lisitry ny tolotra VPN misy amin'izao fotoana izao dia ahitana ny NordVPN, Hide My Ass !, Hola VPN, OpenVPN, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection ary VPN Unlimited. Tsy tolotra ny OpenVPN, fa teknolojia tovozina malalaka ahafahana mamorona azy.
Saika ny rehetra no efa nanambara ampahibemaso ny fikasan'izy ireo handà tsy hanaraka ny fangatahan'ny Roskomnadzor:
Manahoana. Mieritreritra ny fahasarotan'ny fitakiana, tsy manan-tsafidy hafa izahay saingy tsy hanaja izany
Nilaza ny sasany tahaka ny TorGuard, fa hanaisotra ny lohamiliny ao amin'ny tanin'i Rosia izy ireo:
Amin'izao fotoana hanoratana izao. Nandray dingana hanala ny lohamiliny rehetra ao Rosia ny TorGuard. Nofafanay madio tsara ny lohamilina rehetra tao Saint Petersburg sy Moskoa ary tsy hiasa intsony miaraka amin'ny foiben'ny tahiry ao amin'ny faritra izahay.
Ny hany miavaka ao amin'ny lisitra dia ny Kaspersky Secure Connection, tolotra omen'ny orinasam-pikarohana momba ny fiarovana antserasera Kaspersky Labs. Ao Moskoa ny foiben'ny vondrona, noho izany mora hiharan'ny lalàna eo an-toerana. Na dia izany aza, nisalasala tamin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo hanaraka ny fitsipika vaovao ny olona sasany.
Tsy azoko antoka hoe ampitahaina amin'iza ity hadalàna ity.
Manaiky tanteraka hiara-hiasa amin'ny Roskomnadzor ny Kaspersky Secure Connection . Nahoana no gaga amin'izany ny olona!